Wararka - Codsiga warshadaha iyo kala soocida taageerayaasha qaboojinta warshadaha
Waa in la ogaadaa in aanan ka wada hadleynin taageerayaasha warshadaha wax soo saarka la soo saaray (sida qalabka qaboojinta iyo hawo bixinta meelaha dhaadheer sida dhirta warshadaha, keydka saadka, qolalka sugitaanka, hoolalka carwooyinka, garoomada, supermarket-yada, jidadka waaweyn, godadka, iwm), Oo waxaa iska leh qaybta kudarsiga kuleylka dalabka ee ka kooban qaybaha warshadaha-taageere qaboojiyaha warshadaha.
Qaybaha warshadaha, markaa waxay ka dhigan tahay in alaabada noocaas ah aan si toos ah looga iibin doonin macaamiisha, waana aaladaha kuleylka kuleylka dalabka ama qeyb ka mid ah qaybaha dalabka (maxaa yeelay marka lagu daro hawo qaadista iyo kuleylka kuleylka, waxaa sidoo kale jira kuleylyo iyo dareere kuleylinta qaboojinta dareeraha ah. Iyo barnaamijyada kale ee kuleylka lagu baabi'iyo).
Taageerayaasha qaboojinta warshadaha waxaa loo isticmaali karaa in badan oo codsiyo ah, oo ka bilaabma aerospace ilaa cadayga korontada. Noocyada noocan ah ee qaboojinta ayaa loo isticmaali karaa.
Qalabka guryaha iyo qalabka korontada ee xafiisku waa badeecado warshadeed oo leh baahida ugu weyn ee qaybaha taageereyaasha qaboojinta marawaxadaha, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin shuruudaha ugu sarreeya ee awoodda gaarsiinta wax soo saarka ballaaran. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah alaabada noocaas ah waa alaab soosaar warshadeed oo rayid ah, shuruudaha kala-baxa kuleylka badeecada ma badna. Suuqa wax soo saarka ayaa si buuxda u tartamaya. Maaddaama alaabooyinka noocaas ahi aysan lahayn shuruudo sare oo loogu talagalay xaaladaha shaqada ee joogtada ah, shuruudaha kala-baxa kuleylka, iyo shuruudaha kala-baxa kuleylka ee deegaanka shaqada, ma jiraan wax badan oo soo bandhig ah oo ku saabsan qaybta wax soo saarka ee shabakadda toosan ee shabakadda taageereyaasha warshadaha.
Qeybaha ka kooban qaybaha taageereyaasha qaboojinta warshadaha ee ku taxan Shabakada Taageerada Warshadaha waxaa badanaa loo isticmaalaa warshado badan sida hawo-qaboojinta, qaboojinta, kululaynta, gawaarida, tiknoolajiyada wadista, korantada korantada, korontada UPS, Nalalka LED-ka, qalabka farsamada, qalabka isgaarsiinta, qalabka caafimaadka. , qalabaynta, iwm., Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kala-baxa kuleylka iyo qaybaha qaboojinta ee alaabteeda warshaddu dhamaysay.
Xulashada wax soo saarka taageerayaasha qaboojinta warshadaha-soosaarida xulashada sheyga ayaa muhiim u ah xasilloonida wax soo saarka wax soo saarka, sida xawaaraha wax soo saarka, mugga hawada, cadaadiska ma guurtada ah, buuqa, qoyaanka iyo iska caabbinta boodhka, qiimeynta biyuhu, qalabka dhalista, xuduudaha shahaado warshadaha gaar u ah, labaduba waa muhiim tixraacyada xulashada marawaxadaha qaboojinta ee alaabada warshadaha.
Taageerayaasha qaboojinta warshadaha waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo jihada socodka hawada, waxaana loo qaybin karaa 6 qaybood: qulqulka qulqulka, socodka isku dhafan, socodka bartamaha, socodka iskutallaabta (socodka iskutallaabta), afuufiyaha, iyo qeeybaha (bilaa xadka) taageerayaasha. Astaamahooda farsamo waa sida soo socota:
Astaamaheeda: heerka socodka sare, cadaadiska dabaysha oo dhexdhexaad ah
Garbaha mashiinka faleebada ayaa hawo ku riixaya inay u socdaan isla jihada usheeda dhexe. Dareereeyaha taageere axial ayaa la mid ah qalabka wax kiciya. Markay shaqeyso, qulqulka hawada badankiisu wuxuu barbar socdaa usheeda dhexe, si kale haddii loo dhigo dhidibka. Marka qulqulka hawadu ay tahay hawo bilaash ah oo leh eber cadaadis ma guurto ah, marawaxadda qulqulka qulqulka ayaa leh isticmaalka ugu hooseeya ee awoodda. Markaad shaqeyneyso, isticmaalka korontadu wuu kordhayaa marka cadaadiska gadaasha hawadu kor u kaco. Taageerayaasha axial badanaa waxaa lagu dhejiyaa kabadhada qalabka korantada, mararka qaarkoodna waxaa lagu daraa mootada. Sababtoo ah mashiinka axial wuxuu leeyahay qaab dhismeed kooban, wuxuu badbaadin karaa meelo badan, waana sahlan tahay in la rakibo oo si ballaaran loo isticmaalo.
Astaamaheeda: heerka socodka xadidan, cadaadiska dabaysha oo sareeya
Taageerayaasha Centrifugal, oo sidoo kale loogu yeero taageereyaasha bartamaha, markay shaqayaan, garbaha waxay ku riixaan hawo inay ku qulqulaan jihada u qotoma usheeda dhexe (ie radial), qaadashada hawadu waxay ku socotaa jihada xagasha, marinka hawaduna wuxuu ku toosan yahay jihada xagasha. Xaaladaha badankood, saameynta qaboojinta waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo taageere axial ah. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood haddii qulqulka hawadu u baahan yahay in lagu beddelo 90 digrii ama markii loo baahdo cadaadis dabayl oo ka weyn, waa in la isticmaalaa marawaxadda bartamaha. Si adag markaan u hadlo, taageerayaasha sidoo kale waa taageereyaal bartamaha.
Astaamaha: Isbeddelada socodka hawada ee yar, waxtarka sarreeya ee sarreeya, nolosha muddada dheer, iyo xasilloonida wanaagsan
Mabda'a shaqada ee afuufaya ayaa ah in hannaanka cadaadiska hawada inta badan lagu fuliyo ficil xoog xoog ah iyadoo loo marayo dhowr shaqeysiiyayaal shaqeynaya (ama dhowr marxaladood). Afuufuhu wuxuu leeyahay rotor xawaare sare leh. Baalayaasha ku yaal rotor-ka ayaa wada hawadda si ay ugu socdaan xawaare sare. Awoodda bartamaha ayaa keenta in hawadu ay ku socoto qulqulka qaab-dhismeedka aan qasabka ahayn oo ay weheliso ka-noqoshada marinka marawaxadda. Hawada xawaaraha sare ku socota waxay leedahay cadaadis dabayl oo gaar ah. Hawo nadiif ah ayaa ka soo galeysa oo kaabe ka noqonaysa dhexda sanduuqa.
Astaamaheeda: heerka socodka hooseeya, cadaadiska dabaysha oo hooseeya
Marawaxada qulqulka iskutallaabta waxaa sidoo kale loo yaqaan marawaxada qulqulka iskutallaabta, waxay soo saari kartaa aag balaaran oo hawo ah, oo badanaa loo isticmaalo in lagu qaboojiyo dusha weyn ee qalabka. Iridda iyo meesha laga baxo ee taageerahan waxay ku toosan yihiin dhidibka. Taageeraha socodka iskutallaabtu wuxuu adeegsadaa faan-fiiqan yar oo foosto-qaabeeya ah si uu u shaqeeyo. Dhexroor ka mid ah garabka midabkiisu u eg yahay foosto waa mid weyn. Sababtoo ah dhexroorka weyn, waxay isticmaali kartaa xawaare yar oo hooseeya iyadoo lagu saleynayo hubinta wareegga hawada guud ahaan. , Iska yaree buuqa ka dhasha hawlgalka xawaaraha sare ku socda.
Qeybta (bilaa xarig) taageere
Astaamaheeda: cadaadiska dabaysha oo hooseeya, xawaaraha hooseeya, aag weyn
Taageerada qaybta ayaa badanaa loo isticmaalaa kuleylka kuleylka ee guddiga wareegga PCB. Waxaa loo isticmaali karaa kuleylka kuleylka ee guddiga wareegga nidaamka si loo abuuro aag ballaaran oo socodka hawada ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu qaboojiyo dusha sare ee qalabka si loogula baxo kuleylka.
Mugga hawada ee marawaxadda aan xaddidaneyn ayaa la kordhiyay, booska marawaxadduna wuxuu qaadanayaa naqshad isku dhegan si loo kordhiyo awoodda qaadashada hawada. Isla mar ahaantaana, marawaxadda aan qaab-dhismeedka lahayn ayaa leh saameyn carrab-wanaagsan
Ilaalada Fan caaga, Hvac Fan Puller, 12cm Ac Axial Fan, Ilaalada Fan Birta, Taageerada Birta solay 80mm, 172mm Ac Axial Fan,